Yakha okanye Thenga? Ukusombulula iingxaki zeShishini ngeSoftware eyiyo | Martech Zone
Yakha okanye Thenga? Ukusombulula iingxaki zeShishini ngeSoftware eyiyo
NgoLwesihlanu, Agasti 14, 2020 NgoLwesihlanu, Agasti 14, 2020 UJenn Lisak Golding
Ngaba ingxaki yeshishini okanye injongo yokusebenza ekucinezelayo mva nje? Amathuba sisisombululo sayo kwiihenjisi kwitekhnoloji. Njengokufunwa lixesha lakho, uhlahlo-lwabiwo mali kunye nobudlelwane kwezoshishino, kuphela kwithuba lakho lokuhlala uphambili kwabakhuphisana ngaphandle kokuphulukana nengqondo yakho esizisebenzelayo.
Utshintsho ekuziphatheni komthengi lufuna ukuzenzekelayo
Sele uyazi i-automation ayisebenzi-ngokungahambelani nokusebenza: iimpazamo ezimbalwa, iindleko, ulibaziseko, kunye nemisebenzi yesandla. Kubaluleke kakhulu, yile nto abathengi ngoku abayilindeleyo. Umkhwa wethu wedijithali odibeneyo, owonakaliswe kukuthandwa nguFacebook, uGoogle, iNetflix kunye neAmazon, kuthetha ukuba abathengi ngoku banqwenela inqanaba elifanayo lomntu, isantya kunye nokwanelisa kwangoko, abathengisi abanomvuzo ababonelela ngezi ntlobo zamava, kwaye belahla abathengisi abangenalo.
Olo tshintsho ekuziphatheni ayisiyonto ekufuneka uyithathe kancinci: Amava abaThengi ngoku atshintsha izigqibo zokuthenga ngaphezulu kwexabiso, indleko, ukusebenza okanye ezinye iimpawu zohlobo, batsho abaphandi.
Kumashishini, oku kuguqulela kwiintlungu ezikhulayo kodwa kunye namathuba amakhulu okuphumelela abo bakhuphisana nabo: Phantse abathathu kwabaxhasi beenkonzo zabathengi bathi ukulawula umthwalo wabo ngumceli mngeni wabo omkhulu (Phumelela uMthengi), Kwaye amashishini aphulukana phantse ne- $ 11,000 ngonyaka, ngomsebenzi ngamnye, ngenxa yokunxibelelana kunye nokusebenzisana (Mitel).
Akumangalisi: Abasebenzi baxela ukuchitha ama-50% exesha labo befuna amaxwebhu ngesandla, ngokomyinge wemizuzu eli-18 kuxwebhu ngalunye (Iifayile ze-M). Eli nani linyuka liye kuma-68.6% xa usongeza unxibelelwano kunye nemisebenzi yokusebenzisana (Ukuqonda kweCIO).
Ngelixa kulula ukubona izibonelelo zokuzenzekelayo, ukumiliselwa kwayo akucaci gca. Ngaba kufuneka wakhe isisombululo esisesikweni? Thenga into ngaphandle kweshelufu? Tweak isisombululo esele sifakiwe? Ezo zinokuba nzima, kwaye zinzima izigqibo.
Ukuqinisekisa ukuba utyalo-mali lwakho lwetekhnoloji luyinzuzo
Ukungazithembi, ukurhuqa kunye nokutsala okuza nokukhetha itekhnoloji elungileyo kubile kule: Sisiphi isisombululo esingazukuchitha ixesha lam kunye needola?
Ukubeka ngokulula, into eyahlulahlula imali kutyalo-mali lwenzululwazi kwezobuhlwempu yile: Itekhnoloji enenzuzo isombulula iingxaki zeshishini lokwenyani kunye namava, icacisa Elingumda-Isikwere.
Ezi ngxaki zibandakanya:
Ukulibaziseka ekuhanjisweni kweenkonzo
Phinda imisebenzi emibini
Ukungabikho kobuqu okanye ukufaneleka
Ukuqonda izimvo kwizibakala
Zininzi kakhulu iihupu zokutsiba kwimisebenzi elula okanye iimpendulo
Idatha elahlekileyo, edidayo okanye engancediyo, kunye nokunye.
Kuthekani ngala maxesha xa isixhobo setekhnoloji sibuyela umva? Ubukho: Ukungasebenzi kakuhle, ukungahambelani okanye iingxaki ezingalindelekanga zikhokelela kubasebenzi ukuba baqhankqalaze, bashiye isixhobo, kwaye babuyele kwindlela yakudala yokwenza izinto. Ugcina njani ukuba ingenzeki?
Kuya kuvela ukuba unokuqikelela ukuba yeyiphi itekhnoloji eya kuthi iphele ingasetyenziswanga okanye ijongwe njengomthwalo zizalathi ezibini zokungaphumeleli:
Umbutho awuzange uthathe ixesha lokuqonda ingxaki itekhnoloji yenzelwe ukusombulula kunye neziphumo zale ngxaki.
Abasebenzi abayiqondi indlela yokusebenzisa isisombululo esiya kuwenza lula umsebenzi wabo okanye ubomi babathengi.
Lungisa ezo zinto zibekiweyo kwaye uwandisile nje amathuba okuphumelela.
3 Khetha + 3 Amanyathelo
Njengoko ujonga ukuba zeziphi iingxaki ozama ukuzisombulula, unokukhetha ezintathu:
Yakha isoftware yesiko (okanye wenze isisombululo esikhoyo)
Thenga isisombululo esishelufini
Amanyathelo amathathu kufuneka akhokele isigqibo sakho:
Vavanya iingxaki ofuna ukusombulula isoftware
Vavanya iinkqubo ezikhoyo
Ukuqonda iimpembelelo zemali kunye nezixhobo
Yeyiphi inketho efanelekileyo kwimeko yakho?
Bob Baird, umseki we Elingumda-Isikwere, I-Indianapolis esekwe ngokuqinileyo kwisoftware yophuhliso, iqhekeza izifundo azifundileyo ngokunceda imibutho ikhombe esona sisombululo sesoftware:
Abasebenzi bakho bachitha isiqwenga esihle sexesha labo ngokufaka idatha ngesandla.
Ishishini lakho lineemfuno ezizodwa.
Unenkqubo ezimbini okanye ezingaphezulu ezihambelana neemfuno zakho, kodwa ungathanda ukuzidibanisa.
Isoftware yesiqhelo iya kukunika ukhuphiswano.
Awufuni ukuguqula imisebenzi ukuze utshatise amandla esoftware.
Iimfuno zakho ziqhelekile kwaye izisombululo sele zikhona.
Ukulungele ukuguqula imisebenzi yeshishini ukuze utshatise amandla esoftware.
Uhlahlo-lwabiwo mali lwakho lwangaphantsi kwe- $ 1,500 yesoftware.
Kuya kufuneka usebenzise isoftware entsha kwangoko.
Izizathu zokungenzi nto
Abasebenzi ngoku bachitha ixesha elincinci okanye akukho xesha kwiinkqubo zemigaqo okanye eziphindiweyo.
Awucwangcisi ekukhuleni kweshishini lakho kule minyaka imbalwa izayo.
Iimpazamo, ukulibaziseka, ukunxibelelana ngokungachananga okanye iziliphu zomgangatho azikho kwishishini lakho.
Iinkqubo zangoku, ukujika kunye neendleko zokusebenza zilungiselelwe ishishini lakho ngoku nakwixesha elizayo.
Ukwayama Ngokwenza Ulwenziwo?
UBob uphawula ukuqaphela okumbalwa kuphuhliso lwesoftware:
Sukuqala noluhlu lwezinto. Gxila ekuqondeni iingxaki ofuna ukuzisombulula kuqala. Ngokungafaniyo neendawo zebhulethi ngasemva kupakisho lwesoftware, umbono wakho wokuqala woyilo olugqibeleleyo unokuba nesiphene.
Ukwenza ngokwezifiso akufuneki ukuba kungabikho konke okanye kungabikho. Ukuba uyayithanda imiba yesisombululo esele sikhona kodwa ufuna ukwenza ngokusesikweni iinxalenye zaso, yazi ukuba uninzi lwesoftware esele ipakishwe inokulungiswa kwii-API.
Isoftware yokwakha ifuna iindleko zangaphambili. Ayisiyondleko iphakamileyo leyo; uya kuhlawula kwangoko ukuze ubenakho endaweni yokufumana ilayisensi.
Isoftware yesiqhelo ifuna ukucwangciswa kwangaphambili. Akukho nto intsha apha, kodwa kufanelekile ukukhumbula ukucwangciswa kwangoko kubetha ukukhutshwa kwe-backend ukusombulula ingxaki xa isoftware ingenzi njengoko kulindelwe kwaye abasebenzi bayayivukela.
Ukuqeshisa okanye ukuSebenzisa ukuKhanya kweSoftware yakho?
Icandelo lophuhliso lwesoftware likhethekileyo, kwaye ukudibanisa usetyenziso lwewebhu olulungele ishishini kufuna iiseti ezintathu ezahlukeneyo zezakhono. Ingqwalaselo yakho yokuqala (kwaye mhlawumbi enkulu kakhulu), emva koko, yimali: Ngaba unokukwazi ukuziqesha zonke ezi ngcali?
Ngombono owongeziweyo, jonga ukuba umrhumo ophakathi wokuphucula i-NET, kubandakanya izibonelelo, yi- $ 80,000 / ngonyaka, kwaye ufuna iingcali ezizezinye ukujikeleza iqela lakho. Ngokwahlukileyo, ukukhuphela iprojekthi yakho kumzi-mveliso ophuhlise isoftware kuya kubaxabisa malunga ne- $ 120 / ngeyure, izabelo uBob.
I-crux yomcimbi yile, ngaba ukhetho lwakho lokwakha okanye lokuthenga luya kwenza ishishini lakho likhetheke kwaye linqweneleke ngakumbi kubathengi, okanye likunyanzele ukuba utshintshe ishishini lakho ukuze lilungele isoftware?
Bob Baird, umseki we Elingumda-Isikwere
tags: bob bairdukwakha okanye ukuthengaIsikwere esijikelezileyouphuhliso lwesoftwe
CofaMeter: UkuKhangela ukuKhangelwa kweKhankaso, ukuKhangela okuDibeneyo, kunye nokuKhangela ukuKhangela
UmbhaloMagic: IQonga leeNgcaciso zeMiyalezo kwiShishini (i-SMS)